Ayaa Dib iigu Qoray? | Martech Zone
Ayaa Dib iigu Qoray?
Khamiista, Sebtember 9, 2010 Axad, Juun 5, 2015 Douglas Karr
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dadku waxay i weydiiyeen, sideen ku ogaan karaa cidda dib iigu soo dirtay? Marka dadku ay adeegsadaan muujinta dib-u-celinta ee Twitter-ka, way fududahay. Soo gal Twitter-ka ayaa gujin kara Macmacaanka dhinaca midigta bidix. Tiirka saddexaad waa Tweets-kaaga, Retweeted waxayna ku siineysaa liiska dhammaan Tweets-kaaga oo dib loo daabacay iyo sidoo kale cidda sameysay.
Waxaa sidoo kale jira API wac si aad uqabato xogta retweet ee tweet la siiyay. Dib-u-qorista ayaa ah waxqabad mudan in lala socdo… haddii qof uu kor u qaadayo waxyaabahaaga, waxaad leedahay u doode adiga ama astaantaada. Taasi waa qof aanad doonaynin inaad raacdo oo keliya, laakiin qof aad u baahan tahay inaad ku daba gasho hawlgal qoto dheer!
kafaalasho: Twitter waa hab fiican oo lagu soo jiito tiro badan oo indho-fiiqis ah farriintaada suuq-geynta - laakiin dadka badankood ma oga waxa ay sameynayaan waxayna ku dambeeyaan inaysan helin wax jawaab ah. Ama iyagu ma haystaan ​​taageerayaal ku filan, ama waxay u diraan farriimo qaldan waqtiyada qaldan ama waxay sameeyaan mid ama in ka badan tobannaan khaladaad dhimasho ah. Riix Halkan si aad u barato sida ugu fudud ee anshax ahaan loo kobcin karo bartaada Twitter-ka soo socota.
Tags: retweetyaa dib u daabacayyaa igu soo celiyey
Sep 10, 2010 at 2: 32 PM
Nifty khiyaano yar. Waad ku mahadsantahay dhajinta Doug!
Jan 20, 2011 saacadu markay ahayd 11:46 PM
Had iyo jeer way fiicantahay inaad aragto qoraallo duug ah oo lala noolaa farabadan Tweets! Ayaa dib u daabacay? 😉
Saaxiib weyne, markii aan riixo tweet-keyga oo ku jira qaybta dib loo soo qoro ee Kuwa Kale, ma lahan wax liis ah oo ku saabsan cidda dib u daabacday sida ay caadiyan u sameyso. Fikrad kasta sababta? ama sideen u arkaa qofka ay ahayd?
May 25, 2011 at 4: 06 AM
Waan aqrinayay waxaa laga yaabaa inay dib u daabaceen dadka aadan raacin iyo dadka ilaaliya qoraalkooda
Jul 9, 2011 markay ahayd 1:16 AM
hadaba sidee buu u shaqeeyaa barnaamijkani
Jul 9, 2011 markay ahayd 2:20 AM
Maahan barnaamij, Karberney, dhab ahaantii waa muuqaal ka dhex muuqda dashboardka Twitter-ka.
waw maxaa qasaaray.
miisaankaaga oo yaraada, qubeyso, xiir gadhkaaga xun, iyo tan ugu muhiimsan, jooji inaad dhahdo nacas nacas ah iyo wax xunba, ku dhajinta internetka. Nacas nacas lumay
Waxaad kaloo isticmaali kartaa http://www.tweetreach.com, http://www.sharedcount.com, http://www.whotweetedme.com, iyo mid ka mid ah ilaha aan macquul ahayn in la ogaado cidda dib kuugu soo dirtay waxay noqon laheyd la-taliyaha 'Boqortooyada Avenue' Kesley '.